သဘာဝတိုင်းခမ်းနားနေတဲ့ မြေအောက်ကမ္ဘာဗီယမ်နမ်လှိုဏ်ဂူကြီး | Buzzy
လှိုဏ်ဂူထဲမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသော အသက်ရှုမှားလောက်အောင်လှတဲ့ပုံတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.
၁၉၉၁ခုနှစ်တွင် သာမာန်လယ်သမားတစ်ယောက် ဗီယမ်နမ်,Phon Nha-Ke Bang national park က လှိုဏ်ဂူကြီးနားကို မျက်စိလည်ပြီး ရောက်သွားခဲ့တယ်။ အထဲမှာပြင်းထန်လွန်းတဲ့ရေစီးသံတွေ ကြားနေရသလို တစ်ယောက်ထဲလည်းမ၀င်ရဲတာကြောင့် ပြန်လှည့်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဒေသခံတွေက ထိုလှိုဏ်ဂူကြီးကို Son Doongလို့ အမည်ပေးထားပေမယ့် ဘယ်သူကမှ အထဲကိုသွားပြီး မစူးစမ်းရဲကြဘူး။
၂၀၀၉ခုနှစ်မှာ ဗြိတိန်သိပံ္ပပညာရှင်များဦးဆောင်တဲ့ Howard Limbert အဖွဲ့က ထိုလှိုဏ်ဂူကြီးထဲကိုဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ အထဲကိုသွားတော့ လှိုဏ်ဂူကြီးရဲ့အရှည်က ၅ကီလိုမီတာရှိပြီး မီတာ၁၅၀ကျယ်ပါတယ်။လေ့လာကြည့်ပြီးနောက် ထို Son Doong လှိုဏ်ဂူကြီးကို ကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံးလှိုဏ်ဂူတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။
၁၉၉၁ခုနှဈတှငျ သာမာနျလယျသမားတဈယောကျ ဗီယမျနမျ,Phon Nha-Ke Bang national park က လှိုဏျဂူကွီးနားကိုရောကျသှားခဲ့တယျ။ အထဲမှာပွငျးထနျလှနျးတဲ့ရစေီးသံတှေ ကွားနရေသလို တဈယောကျထဲလညျးမဝငျရဲတာကွောငျ့ ပွနျလှညျ့ထှကျလာခဲ့တယျ။ ဒသေခံတှကေ ထိုလှိုဏျဂူကွီးကို Son Doongလို့ အမညျပေးထားပမေယျ့ ဘယျသူကမှ အထဲကိုသှားပွီး မစူးစမျးရဲကွဘူး။
၂၀၀၉ခုနှဈမှာ ဗွိတိနျသိပ်ပံပညာရှငျမြားဦးဆောငျတဲ့ Howard Limbert အဖှဲ့က ထိုလှိုဏျဂူကွီးထဲကိုဝငျဖို့ဆုံးဖွတျခဲ့တယျ။ အထဲကိုသှားတော့ လှိုဏျဂူကွီးရဲ့အရှညျက ၅ကီလိုမီတာရှိပွီး မီတာ၁၅ဝကယျြပါတယျ။လလေ့ာကွညျ့ပွီးနောကျ ထို Son Doong လှိုဏျဂူကွီးကို ကမ်ဘာမှာအကွီးဆုံးလှိုဏျဂူတဈခုအဖွဈသတျမှတျလိုကျပါတယျ။
ထိုလှိုဏ်ဂူက အောက်ဖက်မီတာ၈၀မှာရှိတာကြောင့် ကြိုးနဲ့ဆင်းရပါတယ်.
ထူးခြားစွာလှပနေတဲ့ထိုနေရာမှာ ဒေသအလိုက်ပေါက်ရောက်တဲ့ပန်းပွင့်ငယ်လေးတွေ၊ ချစ်စရာတိရစ္ဆာန်လေးတွေ၊ရေကန်တွေနဲ့ တိမ်လေးတွေတောင်ရှိပါသေးတယ်။ လှိုဏ်ဂူထဲမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသော အလွန်လှပတဲ့ပုံတွေကို Bright Side မှတစ်ဆင့်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ထူးခွားစှာလှပနတေဲ့ထိုနရောမှာ ဒသေအလိုကျပေါကျရောကျတဲ့ပနျးပှငျ့ငယျလေးတှေ၊ ခဈြစရာတိရစ်ဆာနျလေးတှေ၊ရကေနျတှနေဲ့ တိမျလေးတှတေောငျရှိပါသေးတယျ။ လှိုဏျဂူထဲမှာ ရှာဖှတှေရှေိ့ထားသော အလှနျလှပတဲ့ပုံတှကေို Bright Side မှတဈဆငျ့ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ထူထပ်တဲ့တောတောင်ကြီးထဲမှာ ၃မီတာအရှည်ရှိသစ်ပင်များပေါက်ရောက်နေပြီး မျောက်၊လင်းနို့နဲ့ အခြားတိရစ္ဆာန်တွေလည်းအများပြားတွေ့ရပါတယ်။